“(၉)လပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့ …ယွန်းဝတီလွင်မိုးရဲ့ သားလေး Liam” – ရှအေလငျး
ယွန်းဝတီလွင်မိုးရဲ့ သားလေး Liam လေးက ဒီနေ့မှာ (၉)လတိတိပြည့်လို့ သွားပါပြီ။ ယွန်းဝတီလွင်မိုးတစ်ယောက် အဝေးကနေ သားလေးကို ချစ်မဝ ဖြစ်လို့နေပါတယ်။
ယွန်းဝတီလွင်မိုး ရဲ့ သားလေး Liam က ဒီနေ့(မေလ၆ရက်)မှာ (၉)လတိတိပြည့်လို့သွားခဲ့ပါပြီ။ (၉)လပြည့်သွားတဲ့ သားလေးကိုလည်း မေမေယွန်းဝတီလွင်မိုးတစ်ယောက် ချစ်မဝ ဖြစ်လို့နေပါတယ်။ သားလေးရဲ့ ပုံလေးကို သူမရဲ့ အင်စတာဂရမ်မှာ တင်ပြီး ယခုလို ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။
“My love.. 9months in my belly.9months old today. Wow “ ဆိုပြီး သူမက ဆိုပါတယ်။ဗိုက်ထဲမှာ (၉)လတိတိရှိနေခဲ့တဲ့ သားလေးက ဒီနေ့မှာ (၉)လသား အရွယ်ကို ရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီတဲ့။
ယွန်းဝတီလွင်မိုးက လက်ရှိမှာ ခင်ပွန်းနဲ့အတူ သြစတြေးလျမှာ ပညာသင်ယူနေတာ ဖြစ်ပြီး သားလေးကို မိခင်တို့နဲ့အတူ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ထားခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ယွန်းဝတီလွင်မိုးဟာ သားလေး Liam ကို မြန်မာနာမည် အနေနဲ့ လွင်ထက် လို့ နာမည်ပေးထားပါတယ်။ Liam က အခုဆိုရင် ၆ လသားအရွယ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး ထိုင်တတ်နေပြီလို့လည်း သိရပါတယ်။ မေမေယွန်းဝတီလွင်မိုးကို ချစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေက သားလေး Liam ကိုလည်း အချစ်တွေ အများကြီး ပေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
ယှနျးဝတီလှငျမိုးရဲ့ သားလေး Liam လေးက ဒီနမှေ့ာ (၉)လတိတိပွညျ့လို့ သှားပါပွီ။ ယှနျးဝတီလှငျမိုးတဈယောကျ အဝေးကနေ သားလေးကို ခဈြမဝ ဖွဈလို့နပေါတယျ။
ယှနျးဝတီလှငျမိုး ရဲ့ သားလေး Liam က ဒီနေ့(မလေ၆ရကျ)မှာ (၉)လတိတိပွညျ့လို့သှားခဲ့ပါပွီ။ (၉)လပွညျ့သှားတဲ့ သားလေးကိုလညျး မမေယှေနျးဝတီလှငျမိုးတဈယောကျ ခဈြမဝ ဖွဈလို့နပေါတယျ။ သားလေးရဲ့ ပုံလေးကို သူမရဲ့ အငျစတာဂရမျမှာ တငျပွီး ယခုလို ပွောထားတာတှရေ့ပါတယျ။
“My love.. 9months in my belly.9months old today. Wow “ ဆိုပွီး သူမက ဆိုပါတယျ။ဗိုကျထဲမှာ (၉)လတိတိရှိနခေဲ့တဲ့ သားလေးက ဒီနမှေ့ာ (၉)လသား အရှယျကို ရောကျရှိသှားခဲ့ပွီတဲ့။
ယှနျးဝတီလှငျမိုးက လကျရှိမှာ ခငျပှနျးနဲ့အတူ သွစတွေးလမြှာ ပညာသငျယူနတော ဖွဈပွီး သားလေးကို မိခငျတို့နဲ့အတူ မွနျမာနိုငျငံမှာ ထားခဲ့တာလညျး ဖွဈပါတယျ။ယှနျးဝတီလှငျမိုးဟာ သားလေး Liam ကို မွနျမာနာမညျ အနနေဲ့ လှငျထကျ လို့ နာမညျပေးထားပါတယျ။ Liam က အခုဆိုရငျ ၆ လသားအရှယျရှိပွီဖွဈပွီး ထိုငျတတျနပွေီလို့လညျး သိရပါတယျ။ မမေယှေနျးဝတီလှငျမိုးကို ခဈြတဲ့ ပရိသတျတှကေ သားလေး Liam ကိုလညျး အခဈြတှေ အမြားကွီး ပေးထားတာ တှရေ့ပါတယျ။
အဆိုတော် တသသ က စီးရီးထုတ်ပေးဖို့ ကမ်းလှမ်းခြင်းခံရတဲ့ ညီမလေး.. နားထောင်ကြည့်လိုက်ပါဦးနော်
မက်ဆီ , နေမာ , ရိုနယ်ဒို တို့ ရဲ့ ကြောက်ခမန်းလိလိ တစ်မိနစ်စာ ဝင်ငွေများ